သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa ကနေထိုင်မှု
အကောင်းဆုံး သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများသြစတြေးလျရှိနေထိုင်မှုအစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်မှုသည်သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သြစတြေးလျရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယအနေဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ , သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခွင့်၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ သြစတြေးလျရှိနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်များ၊ သြစတြေးလျ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ သြစတြေးလျ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ သြစတြေးလျတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ သြစတြေးလျတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်သြစတြေးလျတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ သြစတြေးလျသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ သြစတြေးလျ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ inစတြေးလျ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ visaစတြေးလျတွင်ရွှေဗီဇာ၊ Australiaစတြေးလျ၌ရွှေဗီဇာ၊ inစတြေးလျတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ သြစတြေးလျတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ residစတြေးလျတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ Australiaစတြေးလျတွင်ရွှေဗီဇာ၊ Australiaစတြေးလျတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်သြစတြေးလျတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - AUD 1,500,000
Aussies အတွက်တော့အပြင်လူဟာခင်ဗျားဒီနေရာမှာမတွေ့ဖူးသေးတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ပဲ။ Mate သင်္ဘောသည်soulစတြေးလျ၏စိတ်ဝိညာဉ်၏လှုပ်ခါနေသောနှလုံးဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျသည်သူငယ်ချင်းဟောင်းများသာမကသူငယ်ချင်းဟောင်းများဖြစ်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားသည်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့အိမ်ထောင်ဖက်သင်္ဘောပေါ်မှာဒီအပြုအမူကတောက်ပပြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ ဘယ်သူမဆိုအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောတယ်။ Uluru အနီရောင်သဲများမှအစ Great Barrier Reef ၏ရေများနှင့်အပင်များပေါများသောမိုးသစ်တောများသို့သြစတြေးလျသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြွင်းမဲ့ပျော်မွေ့ဆုံးပုံမှန်မြင်ကွင်းများဖြင့်ဂုဏ်ပြုခံရသည် - ထို့ကြောင့်ပြင်ပတွင်နေထိုင်လိုသူမည်သူမဆိုအားမအံ့သြစေပါ။ သဘာဝတရား၏ဤစိတ်အားထက်သန်မှုသည်သြစတြေးလျ၏သွေးပြန်ကြောများမှတဆင့်နက်ရှိုင်းစွာစီးဆင်းသွားပြီးနိုင်ငံ၏အတွေ့အကြုံများထူထောင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အဘိုရီးဂျင်းယဉ်ကျေးမှုအတွက်မြေကြီးနှင့်သိကျွမ်းသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုသည်နှစ်ပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ခါတစ်ရံသဘာ ၀ ဘဝသည်ဝေလငါးမန်းများနှင့်တစ်လကြာရေကူးနိုင်သည်။ သို့သော်ဒေသခံများကမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရာများကိုစုံစမ်းရန်လည်းစိုးရိမ်ကြသည်။ Sydneysider များသည်အရုဏ်တက်ချိန်တွင်ရေကူးခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ Canberrans သည်သီတင်းပတ်ကုန်ဆုံးသောအခါအိုင်ပတ်ပတ်လည်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် Perth's King Park သည်အနီးအနားရှိပျော်ပွဲစားအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျ၏အတွေ့အကြုံများသည်ယနေ့သူ၏ဘဝပုံစံကိုအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သြစတြေးလျ၏ပထမဆုံးနှင့်ရာသီအလိုက်ပုံပြင်များသည်ဘော်ရီဂျင်နီဂျင်းနှင့်တောရက်စ်ရေလက်ကြားကျွန်းသားများအုပ်စုနှင့်နေရာတစ်ခုရှိသည်။ သူတို့၏ဆင်တူသောမျိုးနွယ်စုစကားများ၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နည်းစနစ်များနှင့်ရာဇဝင်များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောတည်မြဲသောလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုရာစုနှစ်များစွာကြာအောင်တည်ဆောက်ထားသည်။
ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ Dreamtime Southern X သို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်ကသမားရိုးကျဘော်ရီဂျင်နီလူနေမှုပုံစံကိုနိဒါန်းရယူပါ။ သို့မဟုတ်ဆစ်ဒနီ Opera House တွင်ကျင်းပသည့်Australiaစတြေးလျပြည်သူ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအကပြိုင်ပွဲတွင် Dance Rites ပွဲသို့ပြောင်းပါ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်နှင့်အမျိုးမျိုးသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်နိုင်ငံ၏တုန်လှုပ်နေသောမြို့ပြဒေသများ၊ ယနေ့သြစတြေးလျ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကွန်ရက်များပေါင်းစပ်မှုကကျွန်ုပ်တို့စားသောအစားအစာများမှသည်ငါတို့မျှဝေသည့်ပွဲတော်များအထိအရာအားလုံးကိုသက်ရောက်စေသည်။ အနိုင်ရသည်ဖြစ်စေစားသောက်သည်ဖြစ်စေအပေါင်းအဖော်များနှင့်အတူအောင်ပွဲခံသည်ဖြစ်စေမိသားစုနှင့်ဘုံစားပွဲတစ်ခုတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်တစ်ခုသည်သြစတြေးလျယဉ်ကျေးမှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများမှာပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်သည်။ ဘစ်စထရိုနံနက်စာစားချိန် မှစ၍ ပင်လယ်ကမ်းခြေရေခဲမုန့်များနှင့်အဆင့်မြင့်အစားအစာများအထိ၊ သြစတြေးလျားချက်ပြုတ်မှုသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှသက်ရောက်မှုများနှင့်လုံးဝထူးခြားစေရန်အတွက်ချက်ပြုတ်မှုအသစ်များနှင့်ရောစပ်ထားသည်။ ဒေသခံပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များမှလှုံ့ဆော်မှုကိုခံယူခြင်းသည်သြစတြေးလျ၏ချိုသောသောက်စရာများအတွက်လည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများစွာသည်ချစ်စရာကောင်းသောဝိုင် ၆၅ ခုမှတစ်ဆင့်တည်ရှိပြီးလက်သမားသန့်စင်စက်ရုံများနှင့်အနုပညာပုလင်းချောင်းများဖြင့်ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့်အတူသြစတြေးလျမြောက်မြားစွာသည်၎င်းတို့၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကိုထင်ဟပ်စေသောစပျစ်ဝိုင်၊
မိတ်ဖက်များနှင့်အံ့ ing ဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများအားစားသောက်ပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖျော်ရည်ဖျော်ဖြေခြင်း - အာရှပန်းကန်သည် Melbourne လမ်းရှိလမ်းပေါ်ရှိအရသာကိုတန်ဖိုးထားသည်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံ၏မြောက်မြားစွာသောပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ဂရိကမ်းလှမ်းမှုပန်းကန်ပြားကိုနှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေစစ်မှန်သောသြစတေးစတိုင်ဖြစ်သည်။ သဘာဝတရားကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးသည့်ဘဝပုံစံနှင့်အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောကမ်းရိုးတန်းနှင့်တွဲဖက်သောအခါသင်ဘာရသနည်း။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲပင်လယ်ကမ်းခြေယဉ်ကျေးမှု။ shoesစတြေးလျလူမျိုးများသည်သူတို့၏ဖိနပ်ကိုစတင်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏အလွန်ကောင်းမွန်သောပင်လယ်ကမ်းခြေအများစုကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ရေတွက်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပုရစ်ပုလင်းများဝေမျှခြင်းသို့မဟုတ်နေ့ခင်းဘက်ကိုစူးစမ်းခြင်းတို့အတွက်မရေမတွက်နိုင်သောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေသည်။
ဒီသမုဒ္ဒရာယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသြစတေးလျသည်လှိုင်းများနှင့်ဝေးသောအချိန်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤယဉ်ကျေးမှုသည်အတော်လေးကြာမြင့်စွာကတည်းကသြစတြေးလျဂီတမှကလေးတီဗွီအစီအစဉ်များအထိအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ outစတြေးလျ၏ထူးခြားချက်မှာအမျိုးမျိုးသောမြင်ကွင်းများ၊ မရေမတွက်နိုင်သောဘုံအံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်ဘော်ရီဂျင်နီယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကွန်ယက်များနှင့်နက်ရှိုင်းစွာပေါင်းသင်းခြင်းတို့၏နေရာဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံနှင့်ပြင်ပကိုချစ်ခြင်းသည်သြစတြေးလျ၏ဘဝပုံစံကိုကျွေးမွေးသောကြောင့်မြို့ပြoutsideရိယာအပြင်ဘက်ရှိသြစတြေးလျနိုင်ငံ၏သဘာဝကွန်ယက်များနှင့်ကြယ်ပွင့်ညနေခင်းကောင်းကင်ယံများနှင့်ပြောင်ပြောင်တောက်လောင်နေသောကြယ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်အခွင့်အလမ်းများစွာရရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပွင့်လင်းသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျ၏စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်မတူနိုင်သည့်ပုံမှန်ခမ်းနားထည်ဝါမှုတို့ကသင်၏အနာဂတ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်သင်မျှော်မှန်းထားသည့်အခွင့်အလမ်းအပေါ်တွင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျသည်ဘဝကိုတန်ဖိုး ထား၍ ချစ်မြတ်နိုးရပြီး၊ ထိရောက်မှုရှိပြီးသွေးထွက်လွန်နေသောနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်လိုအပ်သောသူများအတွက်စံပြနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောဘဝလမ်းစဉ်ကြောင့်လူသိများသောသြစတြေးလျနိုင်ငံသည်မြောက်ပိုင်းဥရောပတိုင်းပြည်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စေ့စပ်သေချာမှုနှင့်အတူ joie de vivre နှင့်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများ၏သာယာဝပြောမှုဖြစ်သည့်ကြွယ်ဝမှုကိုအလေးထားသည်။
အခြေခံမြို့ပြအသိုင်းအဝိုင်းများသည်ကျယ်ပြန့်ပြီးကျယ်ဝန်းသည့်ရာသီဥတုတွင်ကျယ်ပြန့်သောအုပ်ချုပ်မှုများ၊ အလုပ်များနှင့်အပန်းဖြေခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုစီစဉ်ပေးသည် (လူ ဦး ရေအထူသည်မြို့တော်၌ပင်လက်တွေ့ကျသည်ထက်ပိုသည်) ။ ထို့အပြင်မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ပြဒေသများသည်Australianစတြေးလျ၏ထူးခြားထင်ရှားသောထူးခြားသောထူးခြားသောအရည်အသွေးများဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ လှပသောပင်လယ်ကမ်းခြေများ၊ ပင်လယ်ရေနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိပြီးမတူညီသောစကြာ ၀ fromာမှပေါ်လာသည့်အတိုင်းအဆမဲ့နေရာများနှင့်မြင်ကွင်းများ!
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
အတွက်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများ အတွက်ရွှေဗီဇာ ၾသစေတးလ်
Subclass 888 (အမြဲတမ်း) ဗီဇာ
သြစတြေးလျ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
အဘယ်ကြောင့်သြစတြေးလျ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ဘို့သွားရ
သြစတြေးလျသည်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုနီးပါးတည်ငြိမ်သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသောကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၂ ခုမြောက်အကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မြင့်မားသောလူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ မတူကွဲပြားသော၊ ထူးခြားသောသဘာ ၀ ၏လှပမှုနှင့်တည်ငြိမ်။ လုံခြုံသောဘဝသည်၎င်းအားပြောင်းရွှေ့လိုသူများအတွက်အဆင့်မြင့်နေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ နိုင်ငံ၏ရွှေနေထိုင်မှုအစီအစဉ်တွင်တိကျသောသတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများရှိပြီးသင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုထပ်မံထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲသင်၏မိသားစုဝင်များကိုသင်၏လျှောက်လွှာတွင်ထည့်နိုင်သည်။
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေးများအားသြစတြေးလျားအိမ်ယာအကျိုးခံစားခွင့်များကိုအသက် ၁၈ နှစ်အထိတိုးနိုင်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အထက်မှီခိုနေသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည်အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းသူများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
Residency သြစတြေးလျရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည်ယခင်အတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်းများလိုအပ်သည်။ သင်သည်အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း၊ စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံနှင့်သြစတြီးယားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်တင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ မင်းကသြစတြေးလျားမှာငါးနှစ်ကအနည်းဆုံး ၂ နှစ်နေရမယ်။ ဤအစီအစဉ်သည်သြစတြေးလျအာဏာပိုင်များကအထူးအကျိုးရှိသည်ဟုယူဆသောလျှောက်ထားသူများအတွက်ဤလိုအပ်ချက်ကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်။ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ၀ င်ငွေသည်Australianစတြေးလျနိုင်ငံ၏အခွန်စည်းကြပ်မှုဥပဒေနှင့်အညီအခွန်စည်းကြပ်ရန်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗီဇာအတွက်လျှောက်ထားရန်အနည်းဆုံး AUD ၁.၅ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်အနည်းဆုံး ၄ နှစ်ကြာထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ထည့် ၀ င်ငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သောနိုင်ငံ၏ပြည်နယ်ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သည် ၂ နှစ်အတွင်း AUD ၂.၂၅ သန်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြရမည်။
AUD ၅ သန်းနှင့် ၁၅ သန်းအပိုဆောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသင်တန်းများကိုပိုမိုမြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်မင်းရဲ့အလှူငွေများလေလေသင့်လျှောက်လွှာကများလေလေဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ သြစတြေးလျအဘို့ ဖောက်သည်များနှင့်သြစတြေးလျရှိသူတို့၏မိသားစုများကိုAustraliaစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ သြစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သြစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်သြစတြေးလျမှ Golden Visa သို့မဟုတ်သြစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ထားသည်သာမကသြစတြေးလျမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ သြစတြေးလျသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ သြစတြေးလျရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်သြစတြေးလျအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ သြစတြေးလျအတွက်သြစတြေးလျအတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ, သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်သြစတြေးလျအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
သြစတြေးလျမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ ခုသို့သြစတြေးလျ၌ရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသြစတြေးလျမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း။
သြစတြေးလျမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
သြစတြေးလျမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့သြစတြေးလျ၌ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသြစတြေးလျမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
သြစတြေးလျမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
သြစတြေးလျမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ၀ င်ငွေကောင်းကောင်းရသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်၎င်းတို့နေထိုင်သော Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာသွားရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သြစတြေးလျရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်အဆက်အစပ်ရှိပြီးကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသြစတြေးလျရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သြစတြေးလျနေထိုင်ခွင့်
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်သောနေထိုင်မှုအတွက်သြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ သြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ သြစတြေးလျမှသို့မဟုတ်သြစတြေးလျသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုသြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သြစတြေးလျ၏နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကန ဦး လျောက်ပတ်စွာစေ့စေ့စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်သည်။
သြစတြေးလျအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိသောအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency နှင့်အတူရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency စာရွက်စာတမ်းများ၏ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်တမန်တော်။ သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency လျှောက်ထားခြင်းအတွက်စာရွက်စာတမ်းများပြီးသွားလျှင်၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာသြစတြေးလျအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်
သြစတြေးလျားနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေပြီးအခြားအထောက်အပံ့များအတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။
အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်သြစတြေးလျရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျားရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များအားသြစတြေးလျမှသို့မဟုတ်လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်များဖြန့်ဖြူးသူများအားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် သြစတြေးလျများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် သြစတြေးလျတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သြစတြေးလျသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် သြစတြေးလျတွင်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် သြစတြေးလျအဘို့ သြစတြေးလျရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက သြစတြေးလျရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ သြစတြေးလျတွင်သိုလှောင်ရန်သို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်သြစတြေးလျားအတွက်သြစတြေးလျအတွက်အထောက်အပံ့မရရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် သြစတြေးလျအဘို့ တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု သြစတြေးလျအဘို့ သြစတြေးလျရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ၾသစေတးလ် သြစတြေးလျရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် သြစတြေးလျအတွက်ရှေ့ရပျ သြစတြေးလျရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများကိုစီးပွားရေးမပံ့ပိုးပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်သြစတြေးလျ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျသေချာစေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်သော်လည်းသြစတြေးလျားရှိအာဏာပိုင်များမှလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်သြစတြေးလျ၏တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်တို့ဖြင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်သြစတြေးလျအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုသြစတြေးလျသို့ထောက်ပံ့ပေးသည့်သြစတြေးလျတွင် Dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
သြစတြေးလျအတွက်သင်၏နေထိုင်ခွင့်မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်သြစတြေးလျအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့အတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်သြစတြေးလျအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများရှိပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။
အကယ်၍ သြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသြစတြေးလျားနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်တွက်လျှင်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်များပါ ၀ င်သည်။ သြစတြေးလျအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ သြစတြေးလျအဘို့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သြစတြေးလျား၌ပေးသောနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ သြစတြေးလျတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများက Residency မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ သြစတြေးလျားနှင့်အခြားနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေရန်အခြားသြစတြေးလျအတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ခုအောက်တွင်သင်မတွေ့ပါ။
သြစတြေးလျ၏မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်သြစတြေးလျားနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏ Residency ကိုကျော်လွန်သောသြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ သြစတြေးလျတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ or Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (သြစတြေးလျတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပိုမိုသက်သာသည်။ )
သြစတြေးလျသို့ပြောင်းရွှေ့လာသည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် Australiaစတြေးလျတွင်ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် သြစတြေးလျားရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, သြစတြေးလျအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် သြစတြေးလျအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် traditionalစတြေးလျတွင်ရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် (သို့) crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သြစတြေးလျ သြစတြေးလျရှိလက်ရှိစီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် သြစတြေးလျအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
သြစတြေးလျရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ သြစတြေးလျရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် သြစတြေးလျ၌နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
သြစတြေးလျအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ သြစတြေးလျအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, သြစတြေးလျအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
သြစတြေးလျရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
နေထိုင်ခွင့်ပြီးနောက်သြစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၾသစေတးလ်.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုသြစတြေးလျတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်
developmentစတြေးလျနိုင်ငံတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
သြစတြေးလျတွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သြစတြေးလျအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်သြစတြေးလျတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ သြစတြေးလျတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစု ၀ င်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်သြစတြေးလျားနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်၊
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency ကသင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်သြစတြေးလျအတွက်ရှေ့နေလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သြစတြေးလျားသို့ရောက်နေလျှင်သို့မဟုတ်သြစတြေးလျသို့လာရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါက၊ သင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သြစတြေးလျားနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏သြစတြေးလျသြစတြေးလျားပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်အားတရား ၀ င်ခွင့်ပြုချက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးသြစတြေးလျကောင်စစ်ဝန်ရုံးကအက်ပလီကေးရှင်းကိုတရားဝင်ဖြစ်စေတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
သြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုသြစတြေးလျနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောသြစတြေးလျနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်၊ သြစတြေးလျရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ သြစတြေးလျရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ သြစတြေးလျ၌တည်၏။
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် သြစတြေးလျရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်မှု | သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် | သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်မှု
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သြစတြေးလျားနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်သြစတြေးလျနိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြင့်သြစတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ သြစတြေးလျရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားပါ။ သြစတြေးလျရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များနှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်သြစတြေးလျရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ သြစတြေးလျရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသြစတြေးလျ | Australiaစတြေးလျတွင်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ သြစတြေးလျအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးများ သြစတြေးလျအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
သြစတြေးလျ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုmeansစတြေးလျ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်သြစတြေးလျ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သြစတြေးလျသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ သြစတြေးလျအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Australiaစတြေးလျနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ သြစတြေးလျတွင်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်သြစတြေးလျအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊
သြစတြေးလျအတွက်ဒုတိယပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ | သြစတြေးလျရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ သြစတြေးလျအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
သြစတြေးလျရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်သြစတြေးလျ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သြစတြေးလျသို့ရွှေဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း၊ သြစတြေးလျအတွက်ရွှေဗီဇာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ Australiaစတြေးလျရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ goldenစတြေးလျရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်သြစတြေးလျအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊
သြစတြေးလျအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | သြစတြေးလျမှရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ သြစတြေးလျရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ သြစတြေးလျရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ သြစတြေးလျအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
သြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် AUD 1,500,000 ဖြစ်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သြစတြေးလျအတွက် Residency အတွက်ဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သြစတြေးလျရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်သြစတြေးလျမှအေးဂျင့်များသည် Residency ကိုသြစတြေးလျတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။
သြစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်အားဖြင့် Residency ၏မြင့်မားသောအသားတင်တန်ဖိုးရှိတစ် ဦး ချင်းစီအဘို့ဖြစ်၏, ကျနော်တို့သြစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအခကြေးငွေကောက်ခံကျနော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်အားဖြင့် Residency များအတွက်အခြားထောက်ခံမှုအများကြီးပေး။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှာအာရှမှသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ တောင်အမေရိကမှသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှသြစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှသြစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှသြစတြေးလျသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ယူအေအီးမှသြစတြေးလျမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု သြစတြေးလျအဘို့
သြစတြေးလျအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
လစာနှင့်အလုပ်အခြေအနေ - www.fairwork.gov.au
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှပညာရေး - www.education.gov.au
သြစတြေးလျတွင်ပညာသင်ပါ - www.studyinaustralia.gov.au
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်နိုင်ငံသားရေးရာဌာန - www.immi.gov.au
နိုင်ငံခြားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေး ဦး စီးဌာန - www.dfat.gov.au
သြစတြေးလျခရီးသွားလုပ်ငန်း - www.australia.com
Qစတြေးလျ Quarantine နှင့်စစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှု - www.agriculture.gov.au/travelling
link ကိုမှ သြစတြေးလျလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , သြစတြေးလျ၌လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်